नेपाली व्यापारको दर्शन – सेवा गरे मेवा पाइन्छ ! - Living with ICT
Home / Featured / नेपाली व्यापारको दर्शन – सेवा गरे मेवा पाइन्छ !
नेपाली व्यापारको दर्शन – सेवा गरे मेवा पाइन्छ !
Admin Feb 11, 2017	Leaveacomment
कसरी एउटा नेपालित्वको अनुभव गराउदै आध्यात्मीक एवम् दार्शनिक कन्सेप्टले आय बढाउन र राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
निर्मल ज्ञवाली, अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको एउटा वेब डिजाइन एजेन्सी निर्मल वेब स्टुडियोका संस्थापक हुन । उनको सकृयतासगै नेपालमा यादव पोखरेलको नेतृत्वमा नेफिक्स टेक्नोलोजिज कम्पनी पनि सञ्चालनमा छ । नेपालमा रहेको कम्पनीले अस्ट्रेलिया लगायत विश्वका अन्य क्षेत्रमा समेत काम गरिरहको छ । नेपाली दर्शन र मेहनतले सफल बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण निमृल ज्ञवाली र उनको समुहले पुष्टी गरेको छ ।
नेपालमा २० जनाबाट केहि वर्षअघिमात्र सुरु भएको कम्पनीले सन् २०१७ भित्र ५० बढिलाइ प्रत्यक्ष रोजगारी दिने तयारीमा छ । सन् २०१७ भित्रै आफ्नै भवनमा काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको कम्पनीको मुख्य कार्यालय सिड्नी, अष्ट्रेलियामा रहने छ । जहा, निर्मल ज्ञवाली अहिले पनि निर्मल वेब स्टुडियोको रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । यसैगरी शाखा कार्यालय अमेरिका र नेपालमा बिस्तार गरेको छ । यस कम्पनीले सन् २०१७ मा नै वेब डिजाइन अटोमेशन सिस्टम, अफिस टाइम ट्राकिङ सिस्टमहरु सार्वजनिक पनि गर्दै छ ।
बिजनेश डट कममा जेनिफर छ्युले निमर्लको कुराकानीको आधारमा उद्यमशिलता र सफल हुनको लागि नेपाली दर्शनले खेलेको भुमिकाको बारेमा लेख लेखकी छन् । बिजनेश डटकममा निर्मल ज्ञवालीले बताए अनुसार नेपाली बिजनेस फिलोसोफी ब्यापार भन्दा बढि आध्यात्मीक जस्तो सुनिन्छ तर पनि त्यो अलि तथ्यपरक रहेको छ । निर्मल ज्ञवालीले बताएको विजनेस फिलोसफी सामान्य भएपनि त्यसले विश्वब्यापी मान्यता समेत अंगालेको पाइन्छ ।
यो सामान्य मान्यता हो, प्राय मानिस बिजनेस डिल गर्दा इमान्दार र नैतिक मानिसलाई नै छान्ने गर्दछन । अपभोक्ताले पनि असल, सरल एवम सकारात्मक सोच सहितका सेवा प्रदायक छान्ने गर्दछन । यसका साथै स्टेकहोल्डरले पनि स्पष्ट सोच एवम मिसन भएका मानिसहरूसँग ब्यापार गर्न रुचाउछन ।
समग्रमा भन्दा, नेपाली संस्कृतिले पनि स्टेकहोल्डरसँग हुँदा होस वा ब्यापारमा नम्रता एवम् अर्काको भलाइ गर्ने कुरामा अलि बढि नै केन्द्रित भएको देखाएको छ । यसका साथै नेपालीहरूको ब्यापार रणनिती मूलत सेवा गरे मेवा पाइन्छ भन्ने भनाइबाट प्रेरित भएको पाउन सकिन्छ ।
राम्रो बन्नुस अरुको राम्रो गर्नुहोस
तपाइले यस अघिपनि कयौँ पटक सुन्नु भएको होला जे रोप्यो त्यो फल्छ, जस्तो गर्यो त्यस्तै भोग्नुपर्छ वा राम्रो कुरालाई राम्रैले तान्छ आदि । बिजनेसमा पनि यस्तै मान्यता हावी भएको देखिन्छ । यदि तपाइले राम्रो सेवा, सुविधा दिँदै उच्च गुणस्तरयुक्त प्रोडक्टहरू दिए त्यसले ग्राहकहरूलाई खुसी र सन्तुष्टि त दिन्छ नै, साथै त्यसले तपाईलाई पनि अगाडि बढाइरहेको हुन्छ ।
नेपाली दर्शनमा, तपाइले अर्कालाई राम्रो गरे त्यसले तपाइको पनि भलाइ भइरहेको हुन्छ । यसका साथै यदी तपाईले अर्काले प्रत्यासा गरेको भन्दा राम्रो गरे त्यसले तपाइलाई कयौँ गुणा राम्रो गरिरहेको हुन्छ । यसलाई बिजनेसमा पनि लगाउन सके यसले तपाइको बिजनेसलाई पनि सकारात्मक दिशा तर्फ लैजान मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ । यसो गर्दा ग्राहकहरूको अर्डर बढ्ने र त्यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आयमा बृद्धि गराउन मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ ।
एकैछिनका लागि, रिटेल इन्डस्ट्रीमा नर्डस्ट्रम आफ्नो उत्कृष्ट एवम असाधारण ग्राहक सेवकालागि परिचित छ । नर्डस्ट्रम आफ्नो ग्रहक लक्षित आउट अफ द बक्स सोलुसनका लागि प्रसिद्ध रहेको छ । यसका कारण नै यस ब्राण्डका प्रचारक एवम् अन्धभक्तमा दुरगामी प्रभाव पर्नुका साथै वृद्धि पनि भएको छ । यसबाट पनि ग्राहक सेवामा राम्रो गर्नु कति महत्तवपूर्ण छ भनि प्रष्ट्याएको छ ।
एउटा उद्देश्य लिनु
जिउनुको यर्थ त्यतिखेर हुन्छ जब एउटा उद्देश्कासाथ बाँचिन्छ । त्यसैगरि बिजनेसमा पनि एउटा उद्देश्य हुनु जरूरी छ । कयौँ आध्यात्मीक ब्यक्ति, धार्मिक नेता एवम् मोटिभेस्नल स्पिकरहरूले पनि एक उद्देश्का साथ जिवन जिउने सल्लाह दिन्छन र त्यसलाई नै अर्थसिद्ध जिबन भन्न रुचाउँछन ।
यसलाई बिजनेसमा ढाल्ने हो भने , तपाइको विजनेसमा पनि स्पष्ट मिसन हुन जरूरी छ जसले गर्दा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न र राम्रो गर्न मद्दत पुग्छ । एकैछिनका लागि, निर्मत वेब स्टुडियोको उद्देश्य छिमेका साना बिजनेसलाई सहयोग गर्दै त्यसलाई सफल बनाएर आफ्नो ठाँउको आथिक अवस्थालाई समेत सबल बनाउनु हो । यस वेभ स्टुडियो एउटा स्पष्ट एवम महान अद्देश्यका साथ थालिएको हो जसले सेवा गरे मेवा पाइन्छ भन्ने नेपाली आध्यात्मीक दृष्टिकोण बोकेको छ ।
सकारात्मक सोच र मनोवृत्ति तयार गर्नुहोस
तपाईसँग महान उद्देश्य होला जसले अर्काको राम्रो गर्ने पक्का छ तर एउटा सकारात्मक मनोवृक्ति बिना त्यो सम्भव छैन । सकारात्मक मनोबृक्ति हुनु आँफैमा पनि राम्रो नियतच र असल काम गर्ने उर्जा पैदा गर्न सक्नु हो ।
यसले आम मानिस सँग डल गर्दा सकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । यसका अलावा आन्तरिक रूपमा पनि सकारात्मक मनोबृति सकारात्मक कम्पनी कल्तरको विकास गर्न महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्छ जहाँ उत्पादनशीलता र रचनात्मकता वृद्धि हुने मौका पाउछ ।
विजनेस गर्दा, तपाइका कामदारले आफूलाई कसरी विश्व र आफ्ना स्टेकहोल्डर सँग फ्रन्ट–इन्ड गर्ने भन्ने कुराले तपाइको बटमलाइनमा प्रभाव पार्न सक्छ । कस्टमरसँग ब्यक्तिगत रुपमा डिल गर्दा होस वा फोन या इमेलबाट सम्पर्क गर्दा होस , तपाइको आन्तरिक मानसिक मनोबृक्ति सकारात्मक हुन आवश्यक छ, किनभने उनिहरु आँफै नै कम्पनीका एम्बेसेडरहरु हुन । बिजनेसको सकारात्मक पक्षलाई चित्रण गर्दा सकारात्मक मनोबृत्तिका साथ प्रस्तुत गर्न जरुरी छ जसका कारण उपयुक्त दुरगामी सम्बन्ध आफ्ना ग्राहक र आम जनतासँग कायम गर्न सहयोग पुर्याउछ ।
तपाइको वरपरका लाइ सहयोग गर्नुहोस, सुरू नजिकको बाट गर्नुहोस
आफ्नो छिमेकलाइ सहयोग गर्नुहोस । तपाइको उत्कृष्ट सर्भिसहको मद्दतले उनिहरूको बिजनेस बढाउन सहयोग गर्नुहोस । यो अलि पयोगात्मक(प्रयाक्टिकल) पनि रहेको छ । जब हामी आफ्नो छिमेकसँग बिज्नेस सुरु गछौ हामीलाई त्यसो गर्न सहज हुन्छ किनभने हामीलाई आफ्नो छिमेकका बारेमा ज्ञान हुने गर्दछ र त्यसले लोकल इकोनमी बृद्धिमा सहयोग गर्छ ।
जब तपाइको आर्थिक बृद्धि हुन्छ त्यसको फाइदा तपाइको वातावरणले समेत लिन सक्छन । जसको फलस्वरुप विजनेस बढाउन र आर्थिक स्थीतीलाई अझ फैलाउन सहयोग गर्दछ । त्यसैले अर्काको राम्रो गरे त्यसले आफूलाइ समेत राम्रो गर्छ भन्न सकिन्छ ।
अरुलाई राम्रो भर्जनमा फस्टाउन सहयोग गर्नुहोस
जब तपाइले अरुको विकासमा सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसले स्वत राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न मद्दत गर्दछ । त्यो सम्बन्ध जिवनभर सम्म जान सक्दछ । साना ब्यापार ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीलाई तपाइको मध्यम खाल्को ब्यवसायको सहायताले बढ्न दिनु भनेको उसको विस्वास जितेर एक सच्चा ग्राहक पाउनु र तपाइको ब्राण्डको अन्धभक्त बनाउन सफल हुनु सरह हो ।
निर्मल ज्ञवाली आफ्नो छिमेकका एसएमइहरूलाई सहयोग गरेर उनीहरु सँगै फस्टाउन सक्छन । एकैछिनका लागि, सिड्नीमा स्टार्टअपको लहर बढिरहेको छ जुन लोकल इकोनमीका लागि महत्तवपूर्ण हो । उनी थप्छन, सानो विजनेसमा काम गर्नु सहज हुन्छ किनभने त्यहाँ उनीहरूलाई निर्णय प्रकिर्याको लामो झन्जटबाट मुक्ति पाउछन जुन ठूला कम्पनीमा पाउन मूस्किल हुन्छ । निर्णय लिने प्रक्रियाको लामो झन्जटबाट मुक्ति पाउनाले पनि उनिहरूलाई नयाँ टेक्नोलोजी लगायतको प्रयोग गर्न र त्यसमा भिज्न छिटो हुन्छ र जसले बिजनेस फस्टाउन विशेष मद्दत पुर्याउछ ।
अन्त्यमा , सकारात्मक मोनेबृत्ति एवम सोचका साथ एक असल उहदेश्य लिएर केहि गर्नु नै बाँच्नु र बिजनेस गर्नुको उत्तम उपाय हो । यसका सागी सामान्य असल कामहरू, इमान्दारिता, उदार आदि हुन जरुरी छ जसको फलस्वरुप सकारात्मक दुरगामी फल पाउने निष्चित हुन्छ ।
असल काम गर्नु, असल बिजनेस कर्म हो ।
यो बिजनेश डट कममा जेनिफर छ्युले लेखेको लेख ‘लिभिंग विथ आइसिटी’ म्यागजिनको पुष अंकमा प्रकाशन भएको थियो । यी र यस्ता सक्सेस स्टोरी, लेख र जानकारीमुलक सामग्री पढ्न म्यागजिनको नियमित सब्र्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । यो लिंकमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब् गर्न सकिनेछ ।
Previous पोखरामा फागुन ५ देखि क्यान इन्फोटेक तथा मोवाइल एक्स्पो
Next ४ जिबी र्यामसहित अत्याधुनिक फिचर भएकाे Mi 5S Plus नेपाली बजारमा